KwaPorters Grange, inhloso yethu ukuhlinzeka zonke izingane ngekharikhulamu ebanzi futhi elinganiselayo ekhuthaza ulwazi nokuqonda okuthuthukayo ngenkathi ithuthukisa amakhono. Sifisa ukuba nekharikhulamu ebandakanya abafundi ngenkuthalo futhi enikeze inqubekela phambili enhle noma engcono. Kuwo wonke amakharikhulamu ethu sibheka ngokucophelela ukuxhasa izingane zethu ngokukhula kwazo ngokomoya, kokuziphatha, kwezenhlalo nakwezamasiko. Sicela uchofoze lapha ukuthola eminye imininingwane nge-SMSC.
Njengesikole, sifundisa ezomlando, ezokuma kwezwe, ezobuciko kanye nobuchwepheshe bokudizayina (DT) 'ngeKharikhulamu yethu exhunyiwe'. Ezinye izifundo ezifana nePSHE, RE, French, Music ne PE zifundiswa ngokwehlukana yize ukuxhumana kwenziwa nalezi zifundo lapho kuzothuthukisa ngempela amathuba okufunda. Sikholelwa ukuthi le ndlela ehlangene ivumela izingane ukuthi zenze ukuxhumana phakathi kwamakhono abawasebenzisayo esifundweni ngasinye futhi baqinise ukufunda kwabo ezindaweni ezahlukene. Amakhono esiNgisi, e-maths nawokusebenzisa ikhompyutha nawo afundiswa ngaphakathi Kwezifundo Ezixhunyiwe. Ithemu ngayinye ine 'sihloko' esehlukile njengokugxilwe kuso, futhi ngalokhu okuqukethwe Kwezifundo Zikazwelonke kulethwa. Sihlele amathuba ezingane okuthuthukisa amakhono awo esifundweni ngasinye futhi sikhule sibe ngabafundi abazethembayo, nabazimele.
Kubekwe ngezansi imibhalo ewusizo ephathelene noHlelo lweziFundo kanye neSayensi yethu exhunyiwe.
Othisha bonyaka wokuqala basebenzisa ukuhlelela umzuzwana ukuhlinzeka ngamathuba okufunda anengqondo ezinganeni zabo.
Uhlelo Lwesikhathi Esimaphakathi Lwesayensi Yesikole
Bonke abafundi babamba iqhaza esifundweni sesiNgisi sansuku zonke esigxile ekwakhiweni kwamakhono abalulekile opelomagama, ulwazimagama, uhlelo lolimi nezimpawu zokubhala. Zonke izingane ziyakhuthazwa ukuthi zibhale ngokuzimela, imvamisa zisebenzisa izindaba ezaziwayo njengesikhuthazi. Ngaphezu kwesifundo sesiNgisi sansuku zonke, Imisindo ifundiswa ku-KS1 futhi isipelingi nokubhala ngesandla kufundiswa kuso sonke isikole.
EPorters Grange sifundisa 'Imisindo Yokwenziwa' sisebenzisa uhlelo Lwezinhlamvu Nemisindo. Izingane zethulwa eSigabeni 1 sohlelo e-Nursery yethu. Ngesikhathi seSisekelo Sesigaba izingane zifunda ukuthi amagama ahlukaniswe ngamayunithi amancane omsindo, abizwa ngama-phonemes. Phakathi nonyaka 1 no-2 izingane zizofunda wonke amafonimu (noma imisindo) angama-44 olimini lwesiNgisi.
Isigaba Sokuqala Sezincwadi Nemisindo sigxile ekuthuthukiseni amakhono okukhuluma nokulalela ezingane futhi sibeka izisekelo zomsebenzi wemisindo oqala eSigabeni 2. Okugcizelelwa ngesikhathi sesiGaba 1 ukuthi abantwana babone imisindo ebazungezile futhi babalungiselele ukuthuthukisa ukuhlangana ngomlomo amakhono okuhlukanisa.
Isigaba 1 sehlukaniswe ngezici eziyisikhombisa. Isici ngasinye siqukethe imicu emithathu:
* Ukungena emisindweni (ukubandlulula okuzwayo)
* Ukulalela nokukhumbula imisindo (imemori yokuzwa nokulandelana)
* Ukukhuluma ngemisindo (ukuthuthukisa ulwazimagama nolimi)
Izingane bese zidlulela ezigabeni 2 kuya ku-6 ngesikhathi sesigaba esiyisihluthulelo 1. Zifunda ukufunda nokupela amagama zisebenzisa ulwazi lwazo lwemisindo. Sisebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokufundisa nezinsizakusebenza ngezikhathi zethu zemisindo yansuku zonke. Isibonelo kuNyaka 1, izingane zizocelwa ukuthi zifunde amagama ngesikhathi sezinhlamvu nemisindo ngezikhathi zokufundisa. Amanye amagama amagama wangempela kanti amanye amagama angombombayi (noma amagama angajwayelekile).
Ukufundiswa kwemisindo kuqhubeka kuso sonke iSigaba 2 Sokhiye ukuxhasa nokuthuthukisa amakhono okufunda nokupela.
Ekuqaleni, izingane zethu zethulwa ezinhlobonhlobo zezincwadi ezingadikhodwa. Lokhu kusiza ukwethula izingane zethu emisindweni ehlukene yezinhlamvu zemisindo. Sinezincwadi ezahlukahlukene zombili zokufunda okuqanjiwe nokungezona ezingokoqobo ukuze sikwazi izingane ukuthuthukisa amakhono okufunda futhi sandise ulwazi lwazo ngemibhalo ehlukahlukene. Ukufunda kufundiswa ngokufunda okuzimele, okuqondiswayo kanye nokufundwa kwekilasi lonke. Izingane kulindeleke ukuthi zifunde njalo ekhaya ukuthuthukisa ukuqashelwa kwamagama, ukushelela nokujabulela ukufunda.
Zonke izincwadi zethu zokufunda zihlelwe zaba 'amabhendi ezincwadi', okuyindlela yokuqoqa izincwadi ngokwezinga lobunzima bazo. Izingane zizohamba ngamaqembu ezincwadi njengoba amakhono azo okufunda ethuthuka. Izingane ziqondiswa ekukhetheni kwazo incwadi nguthisha wazo ukuqinisekisa ukuthi zikwazi ukufinyelela umbhalo futhi ziqonde okuqukethwe. Izingane ziyakhuthazwa ukuthi zikhethe izincwadi ezihlanganisa uhla lwezinganekwane ezingezona eziqanjiwe .
Izingane esikoleni sethu ziboleka izincwadi emtatsheni wethu wezincwadi omuhle onenqwaba yemibhalo yamanga nengamanga. Izingane zivakashela umtapo wezincwadi isonto ngalinye nekilasi lazo futhi ziyakhuthazwa ukuthi zikhethe izincwadi ezifika kwezintathu abazithandayo. Lezi zincwadi zingathathwa ziye ekhaya ukuyokwabelana nomndeni wazo nabangane.
Sikhuthaza ukufundelwa ubumnandi futhi kunemicimbi eyahlukahlukene phakathi nonyaka eyenzelwe ukukhuthaza lokhu njengeViki Lezincwadi, Isonto Lezinkondlo, imibukiso yezincwadi nababhali abavakashile.
Indlela Yethu Yezibalo
Esikoleni iPorters Grange Primary nase Nursery School sikholelwa ekutheni izibalo ziyithuluzi lokuphila kwansuku zonke. Kuyinethiwekhi ephelele yemicabango nobudlelwano obunikeza indlela yokubuka nokwenza umqondo wezwe. Isetshenziselwa ukuhlaziya nokuxhumana ngolwazi nemibono kanye nokwenza imisebenzi ehlukahlukene nezinkinga zempilo yangempela.
Kuyinjongo yethu ukuthuthukisa izazi zezibalo nge:
umbono omuhle ngezibalo kanye nokwazisa ngokuthakaselwa kwezibalo;
ukukwazi ukuzethemba ngokushelela kwezibalo, imiqondo kanye namakhono;
ikhono lokuxazulula izinkinga, ukucabanga, ukucabanga okunengqondo nokusebenza ngokuhlelekile nangokunembile;
isinyathelo kanye nekhono lokusebenza ngokuzimela nangokusebenzisana nabanye;
ikhono lokuxhumana ngezibalo;
ikhono lokusebenzisa nokusebenzisa izibalo kuwo wonke amakharikhulamu nasezimeni zangempela zempilo;
ukuqonda izibalo ngenqubo yophenyo nokuhlolwa.
ukubamba iqhaza ekufundeni kwezingane zabo ngokusekela izindlela zokubala ezisetshenziswe esikoleni nokuqinisekisa ukuthi umsebenzi wesikole uphothuliwe ngokwamandla abo ezingane.
Eminyakeni 1 kuya ku-6 sisebenzisa iMaths Akunankinga. IMaths Ayikho Inkinga wuhlelo olwakhelwe ezungeze indlela yaseSingapore yokufundisa izibalo futhi lunikezwa ngamaqembu amakhono ahlanganisiwe. Sikholelwa futhi ukuthi amakhono ezibalo kufanele athuthukiswe futhi kubhekiswe kuwo wonke amakharikhulamu nothisha benza ukuxhumana okusobala ezinganeni njengoba zikhula.
Sicela uchofoze lapha ukuthola izigaba zethu zezibalo.
Inhloso yethu ukuhlinzeka ngezifundo ezibanzi futhi ezibandakanya konke ze-PSHE ezinikeza izingane ulwazi, amakhono kanye nezimpawu zokuzigcina ziphilile futhi ziphephile ngenkathi zilungiselela umsebenzi nempilo emphakathini wangakithi naseBrithani yanamuhla. Ikharikhulamu yethu igcizelela kakhulu ukufunda ngokomzwelo, ukwakha ukuqina nokukhulisa impilo engokwengqondo nengokomzimba ukuze izingane zivunyelwe ukuthi zikwazi ukusebenza ngokugcwele futhi zinikele kahle emphakathini ohlukahlukene esiphila kuwo. Shumeka izici ezivikelwe zobuhlanga, ezobulili, inkolelo nezinkolelo, ubulili, ukukhubazeka, ubunikazi bobulili, umshado nobambiswano lomphakathi, ukukhulelwa nokubeletha kanye nobudala kulo lonke uhlelo lwezifundo.
Ikharikhulamu yethu iphefumulelwe futhi yaqondiswa yinhlangano yePSHE, ivumela izingane zethu ukuthi zihlole izingqikithi ezintathu eziyinhloko: Ezempilo Nenhlalakahle, Ukuphila emhlabeni obanzi kanye nobuhlobo. Izingane zinikezwa ithuba lokuhlola ngayinye yalezi zingqikithi kabili phakathi nonyaka wezifundo. Ngokufundiswa kwe-PSHE ne-RSE, sisekela izingane zethu ukuthi zizivikele, zilindele inhlonipho futhi zikwazi ukuthi 'cha' ngokufundiswa kwemvume. Ukubukeza kwethu kwe-PSHE kuqhubeka nokuvumela ukuguquguquka kwikharikhulamu ukuhlola izifundo ezifanele empilweni yesikole nasemphakathini wethu ngaleso sikhathi.
Eminyakeni yokuqala izingane zisekelwa ukuphatha imizwa, zikhulise ukuzethemba, zizibekele imigomo elula futhi zithembe amakhono azo.
Esigabeni sokuqala 1 no-2 ukuhlolwa kwesihloko sokuqala kufakwa phakathi kokubuka konke ukuvumela ukuzivumelanisa nezimo ukuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye nezeqembu. Izifundo zethu zamasonto onke bese zihlelwa ukunika amandla ukuqhubekela phambili olwazini, amakhono kanye nolwazimagama. Kodwa-ke, futhi sinamandla okuhlola i-PSHE ne-RSE masonto onke ngokuxoxisana nangemisebenzi eqhubekayo yezifundo.
Kuwo wonke amakharikhulamu ethu siyaqhubeka nokuhlinzeka izingane zethu ngamathuba okunothisa asekela ukufundisa kwethu.
Uma uneminye imibuzo mayelana nekharikhulamu sicela ukhululeke ukuxhumana nehhovisi lesikole futhi othile uzokujabulela kakhulu ukukusiza.